အဗ္ဗဒူလာAvcıသည်Başakşehirတွင် ‘Actor Performance Laboratory’ တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူ ၁၀ ဦး သည်မည်သည့်ကစားသမားနှင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်အပေါ်မည်မျှတင်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဒဏ်ရာအန္တရာယ်များနှင့်အညီတစ် ဦး ချင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းနီးပါးသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ဒဏ်ရာပြproblemsနာများကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ရာသီ၏အစတွင် Trabzonspor သည် ‘Physical Performance Centre’ ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်မှကျွမ်းကျင်သူများကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ Hunter သည်ဤစနစ်ကို Trabzonspor တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်။
ဒီအစီအစဉ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုနားလည်မှုရှိသူအစီအစဉ်၊ စနစ်၊ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်နားလည်မှုတို့ကိုရှင်းပြပြီး Abdulah Avcıသည်သူ၏ဖော်ပြချက်များကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြောင်းသိရှိခဲ့သူသည်ရာသီအလိုက်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်မည့် Trabzonspor ကိုဖန်တီးရန်သူ၏လက်များကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောဆရာသည်ထိုပန်းတိုင်များအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Burgundy-Blue အသင်းကိုယနေ့စတင်အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
BETPAS423 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! BETBOO648 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! SULTANBET568 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! BETBOO868 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ SUPERTOTOBET0120 TRABZONSPOR’DA ABDULLAH AVCI SESLERİ! BETBABA100 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ BETBOO868 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ RESTBET501 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ RESTBET501 TRABZONSPOR’A ABDULLAH AVCI REÇETESİ
MUSTAFA November 30, 2020 at 3:30 am
SÜERDEM December 3, 2020 at 11:40 am
SOKRA December 4, 2020 at 5:10 am
HAYRİYE December 4, 2020 at 2:40 pm
HAMZA December 6, 2020 at 6:30 am
ZÜHAL December 8, 2020 at 12:30 am
ESRA December 9, 2020 at 8:10 pm
MUSTAFA December 12, 2020 at 3:30 am